Mandrara Ny ‘Fitaomana Ara-politika’ Ny LiveJournal Taorian’ny Namindrana Ny Lohamilina Ho Any Rosia · Global Voices teny Malagasy
Mandrara Ny ‘Fitaomana Ara-politika’ Ny LiveJournal Taorian'ny Namindrana Ny Lohamilina Ho Any Rosia
Voadika ny 10 Avrily 2017 4:29 GMT
Sary: Pixabay, navoakan'i Kevin Rothrock
Tamin'ny volana Desambra lasa teo, namindra ny lohamilin'ny lahatahiriny avy any California ho any Rosia ihany ny sehatra famahanana bilaogy LiveJournal izay novinidin'ny orinasa Fampitam-baovao Rosiana SUP tamin'ny taona 2007.
Raha nanaitra mikasika ny fiovana, nanambara i Anton Nossik (mpanolotsainan'ny Fampitam-baovao SUP teo aloha) fa “nafindra ho ‘akaiky kokoa ireo mikasa hanara-maso azy’ ny lohamilin'ny LJ ‘fa tsy hoe akaiky ny mpanoratra sy ny mpamaky” azy .
Tamin'ny Talata 4 Aprily, navoakan'ny LiveJournal ny nohavaozina tamin'ny fifanarahan'ny mpisera hanitsiana ny dingana horaisiny mba hifanaraka tanteraka amin'ny lalànan'ny Aterineto mahatofoka ao Rosia ny fisiany vaovao ho sehatra famahanana bilaogy. Naneho indrindra ny ahiahiny ireo mpisera toa an'i Nossik fa azon'ny polisy Rosiana hidirana tanteraka amin'ny fanaraha-maso ankehitriny ny lahatahirin'ny tranonkala, araka ny lalàna vao nivoaka vao haingana izay “iadiana amin'ny fampihorohoroana” .
Tsy mila “fitaomana ara-politika” intsony
Ny andininy faha 9.2.7 no iray amin'ireo fanitsiana masiaka indrindra ao amin'ny fepetra fampiasana vaovao izay mandrara ny mpisera amin'ny famoahana “fitaovana fitaomana ara-politika” tsy misy fahazoan-dalana manokana avy amin'ny LiveJournal.
Nilaza tamin'ny RuNet Echo i Damir Gainutdinov, mpahay lalàna misahana manokana ny olan'ny aterineto miaraka amin'ny Agora Fikambanana Mpiaro ny Zon'Olombelona fa tsy tena mampiasa ny teny hoe “fitaomana ara-politika” ny lalàna federaly Rosiana fa mametra fotsiny ihany ny ” fanetsiketsehana korontana”, mametraka fatorana ara-pitantanam-panjakana amin'ny tranga sasantsasany .
“Tsy mifandray mihitsy amin'ny fepetra fampiasana ny LiveJournal ireo dingana ireo,” hoy i Gainutdinov nanazava.
Namoaka voatra roa momba ny fifanarahan'ny mpisera ny LiveJournal: amin'ny teny Rosiana sy amin'ny teny Anglisy, izay manomboka amin'ny teny fampitandremana mivaky toy izao, “Ity dikantenin'ny fifanarahana amin'ny mpisera ity dia dosie tsy manery araka ny lalàna,” arahin'ny rohy any amin'ny antontan-taratasy amin'ny teny Rosiana “manan-kery”. Tsy nanampy teny fampitandremana tao amin'ny dikanteny Rosiana ny LiveJournal .
Araka an'i Gainutdinov, midika mihitsy izany fa te hilaza fotsiny ny orinasa hoe manan-danja kokoa noho ny dikanteny anglisy ny fehezan-dalàna amin'ny dikanteny Rosiana, raha toa ka tsikaritra ny fahasamihafana eo amin'ireo roa ireo. ” Midika ihany koa izany fa tsy maintsy manaraka ny fehezan-dalàna amin'ny teny Rosiana ireo mpisera LiveJournal rehetra, anisan'izany ny olona any ivelan'ny Rosia” hoy izy.
Mampatahotra araka izany ny miditra amin'ny bilaogy iray sy voasaringotra amin'ny “dosie manan-kery ara-dalàna” amin'ny teny Rosiana, ny fifanarahan'ny mpisera aza dia efa fifanekena ankapobeny fotsiny ihany izay mamela ny LiveJournal hampiato na hamafa ny kaontinao, raha mandika ny fitsipika ianao.
” Tsy mametraka ny corpus delicti [porofo mivaingan'ny heloka bevava] ny fepetra fampiasana amin'ny resaka lalàna mifehy ny heloka bevava,” hoy i Gainutdinov.
Ny famoretana midadasika kokoa
Izao fivadihan'ny LiveJournal tampoka tamin'ny “fitaomana ara-politika” izao dia taorian'ny famoretana [mg] tamin'ny fanangonam-bola ara-politika nataon'ny kitapom-batsy an-tserasera Yandex.Money, izay nampiato tampoka ny asany tamin'ny volana Janoary teo ho an'ny mpisera manana ny “tanjona ara-politika,” roa volana latsaka taorian'ny nanombohan'ny lehiben'ny mpanohitra Alexey Navalny fanangom-bola an-tserasera tamin'ny alalan'ny mpitantana ny fampielezan-keviny, Leonid Volkov.
Raha namaly ny tsikera fa niezaka tsy hampizotra ny fampielezan-kevitr'i Navalny amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny sampan-draharaha, dia nilaza tamin'ny tranonkalam-baovao TJournal ny sampan-draharahan'ny gazety Yandex.Money fa manao fiarovan-tena ho azy sy ny ho an'ny mpiserany fotsiny izy noho ny mety hetsika mety hiteraka “manjavozavo ara-pitsarana”.
Hiroso amin'ny fifidianana filoham-pireneny manaraka i Rosia amin'ny volana Martsa 2018. Na dia mbola tsy nanambara ny firotsahany hofidiana, aza ny filoha am-perinasa Vladimir Putin dia inoana tokoa fa hikatsaka ny handresy sy hitondra ny fehim-potoana fitondrany fahefatra izy .